Ciidamadda dowladda federaalka Soomaaliya oo howlgalo ka dhan ah maleeshiyada Al-Shabaab ka bilaabay gobolka Gedo - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaCiidamadda dowladda federaalka Soomaaliya oo howlgalo ka dhan ah maleeshiyada Al-Shabaab ka bilaabay gobolka Gedo
February 23, 2018 Puntland Mirror Somalia 0
Ciidamado katirsan dowladda federaalka Soomaaliya. [Sawirka]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ciidamadda dowladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan gobolka Gedo ayaa howlgalo ka dhan ah maleeshiyada Al-Shabaab bilaabay, sida ay sheegeen saraakiishu.
Faarax Maxamed Tubeec, oo ah sargaal katirsan ciidamadda ayaa warbaahinta dowladda ee Radio Muqdisho u sheegay in howlgal ka dhan ah Al-Shabaab ay ka sameeyeen deegaanadada hoosyimaada magaalada Bardheere ee gobolka Gedo.
Taliyaha ayaa intaas ku daray in ciidamadda ay burburiyeen saldhigyo ay maleeshiyada Al-Shabaab ku lahaayeen deegaanka Juungal, oo u dhow Baardheere.
Ciidamadda dowladda Soomaaliya ayaa howlgalo ka dhan ah ka wada gobolo kale oo ay kamidyihiin Jubbada Hoose , Jubbada Dhex iyo Shabeellaha Hoose.
Al-Shabaab ayaa laga saaray magaalooyinka waa weyn ee kuyaala koonfurta Soomaaliya balse maleeshiyada weli waxay haystaan deegaano badan oo miyiga ah.
March 18, 2018 Dowladda federaalka Soomaaliya oo sheegtay in dhawaan uu bilaabmi doono guluf balaaran oo ka dhan ah Al-Shabaab
March 4, 2018 Ciidamo katirsan Puntland oo gadood ku saabsan mushahaar la’aan ka sameeyay magaalada Qardho
Culimada ku sugan Boosaaso oo codsaday in dadka Soomaaliyeed loo fududeeyo gudashada Xajka
Roobab mahiigaan ah oo la sadaaliyay in ay maashayn doonaan qeybo katirsan gobolada Puntland
Garoowe-(Puntland Mirror) Iyadoo xilli roobaadkii Deyrta uu bilaabmay, roobab mahiigaan ah ayaa la sadaaliyay in ay maashayn doonaan qeybo katirsan gobolada Puntland sida Nugaal iyo Mudug, sida ay sheegayso Roob Saadaalinta Soomaaliya oo ay soo [...]